Izimoto ezindala, ezaziwa nangokuthi izimoto zakudala, ngokuvamile zibhekisa ngaphambi kweMpi Yezwe II noma izimoto ezindala. Imoto endala ingumkhiqizo wesifiso. Yimoto ebisetshenziswa abantu phambilini futhi isengasebenza namanje. Igama lesiNgisi yimoto evuthiwe. Inethiwekhi yemodeli ye-0312 inenombolo enkulu yama-athikili mayelana nezithombe zakudala ...
Ubuchwepheshe besikhathi esizayo ngumbono obonakalayo: Ingqondo yezingane imemezele "ukubuyela ku-t ...
Namuhla usuku nje olujwayelekile kubantu abaningi, kodwa lusuku olubalulekile kubalandeli be-movie yakudala "emuva esikhathini esizayo 2 ″. Namuhla usuku lapho uMarty noDkt.Brown, abalingiswa abaphambili bendaba, bebuyela kokuzayo. Ukukhumbula lolu suku, imikhiqizo eminingi ephathelene nezinto ezihlobene ...
Imodeli yokuqala yezitimela emhlabeni, u-Takara Tom, kuhlelwe ukuthi ivulwe
Abantu abaningi bayazi ngesitimela semaglev, kodwa wake wacabanga ukuthi kungaba kuhle kanjani ukusebenzisa lobu buchwepheshe kumamodeli amathoyizi? UTakara Tom, ongumkhiqizi wamathoyizi waseJapan osethule imisebenzi eminingi yemilingo, usanda kuvuselela imininingwane yokubhuka yemodeli yokuqala yezitimela emhlabeni ...